Ingobo yomlando - iSearch
Qala Wena ithuluzi
isearch - Okthoba 10, 2017
ithuluzi isearch - Juni 21, 2017 0
Ithuluzi lemisebenzi eminingi yokwenza ngcono ikhaya. Imisebenzi emkhakheni we-DIY, njengokugawula, ukugaya nokuvumbulula njalo kudinga ikhono elithile namathuluzi ahlukile. Ukuze ukwazi okuncane ...
ithuluzi isearch - Juni 11, 2017 0
Ukushayela kwe-SDS kungasetjenziswa kalula A classic SDS drill is a changes-changes system for drill. Lolu hlelo lwakhiwa i-1975 yinkampani iBosch. Kusukela ...
ithuluzi isearch - Juni 4, 2017 1
Kuyini ukumba kwesando? I-hammer drill iyithuluzi lokumba izimbobo ngezinhlobo ezinzima zamatshe nokhonkolo oqinile. Usetshenziswa lapho ...
ithuluzi isearch - Juni 3, 2017 0
I-Drill collar - Ithuluzi elilungele ukwenze-it-ngokwakhoers Ithuluzi elihle kakhulu lokukwenza ngokwakho Ezimweni eziningi lapho ushayela khona umgodi oyindilinga ...
ithuluzi isearch - May 28, 2017 0
Kuyini i-screwdriver engenazintambo, kuyini ukuchitheka okungenantambo? Imvamisa i-screwdriver yamagama angenazintambo isetshenziswa kakhulu ezinhlotsheni eziningana, kepha amathuluzi ngamanye ahlukile ...